Sideed si badbaado leh ugu iibsan kartaa cryptocurrencies? - Cazoo
Sideed si badbaado leh ugu iibsan kartaa cryptocurrencies?
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Sideed si badbaado leh ugu iibsan kartaa cryptocurrencies?
Tag: furayaasha gaarka ah, iibso cryptocurrencies, iibso cryptocurrencies si ammaan ah, kormeerka faylalka, dib-u-miisaamidda faylalka, weedh abuur, istaraatijiyad maalgashi, Salada
Waqtiga akhriska: 3 minuti
Hadday tani tahay markii iigu horreysay ee aad i akhrido, soo dhowow! Ama soo dhawow, maaddaama isbeddelka haweenka maalgashadayaashu ay si aad ah u sii kordhayaan. 👩
Halkan Cazoo waxaad wax ugu qoreysaa Cazoo, oo ah saaxiib aan la wadaago qoraalada cilmi-baaristeyda adduunkan weyn ee ah adduunka loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Bogga 1 ee buug-yarahaan waxaa ku jira su'aasha ugu weyn: sida loo iibsado cryptocurrencies si ammaan ah?
Waxaan u arkaa adduunka cryptocurrencies mid aad u xiiso badan sababo aan tiro lahayn. U gudubka meerisyadeeda iyo qaababkeedu ma sahlana, marka laga eego dhinaca aragtida waxay u baahan tahay beddelaad maskaxeed, isbeddel jihada ah. Ugu horreyntii, waa lagama maarmaan in la helo fikradaha aasaasiga ah ee dabeecadda guud, ka dibna la sii xoojiyo aqoonta qalabka aan u adeegsan doonno dejinta hawlgalka.
Tani waxay noqon doontaa waxa aan halkaan ku sameyn doono, hadafkuna waa in la fahmo taas maal gasho amniga badanaa waxaa loola jeedaa leedahay xeelado ku filan.
Istaraatijiyad maalgashi: Immisa ayaa lagu maalgelin karaa cryptocurrencies?
Istaraatiijiyad maalgashi: Maxaan ku sameeyaa maalgashadayda 'crypto'?
Istaraatiijiyad maalgashi: Xagee ku hayaa cryptocurrencies oo aan iibsaday?
Aynu nidhaahno waxaad tahay qof si joogto ah isaga wargeliya boggaga internetka ee waaxda, daraasad badan ka dib, waxaad aakhirkii go'aansatay inaad u qoondeyso boqolkiiba saamiga hantidaada tan.
Su'aasha ugu horreysa ee ay tahay inaad ka jawaabto ayaa ah tan soo socota: waa imisa? Si aan uga jawaabno su’aashan, waa inaan ka digtoonaanno in maalgashi kasta uu leeyahay khataro. Aynu qiyaasno in wax khaldan yihiin iyo in dhammaan Bitcoin iyo nidaamka deegaanka ee cryptocurrency ay burburayaan berri subax. Haddii aad xanaaqdo, waxaad gacmahaaga u tuureysaa hawada, ka dib waad xanaaqsan tahay mar labaad ka dibna waxaad dib ugu laabanaysaa wixii aad qabanaysay adigoon wax dhibaato ah oo gaar ah qabin, waxaad sameysay wax sax ah: waxaad lumisay maalgashi aad awoodid inaad lumiso. Qaddarka cabitaannada ee kaa lumay saameyn kuma yeelan karaan heerka nolosha ee aad markii hore ku noolaan jirtay.
Sidaa darteed, jawaabta su'aasha ah "intee in le'eg" ayaa ah mid shakhsiyadeed oo ku xidhan u nuglaanta halista in midkeen kastaaba uu awood u yeesho inuu qaado isaga oo aan la kulmin cawaaqib xumo. Tani waa tallaabada koowaad; badbaadada ayaa tan marka hore ka timaadda tan.
Aynu hadda u gudubno su'aasha labaad: maxaa la iibsadaa? Waxaan u baahanahay inaan fahano sida loo dhiso faylalka ay ka kooban tahay.
Jawaabta su’aashani waxay ka timid fikrad aasaasi ah: waqti. Inta badan ee aad ku talo jirto inaad ku soo gaadho suuqa waxaad u baahan doontaa inaad ku dhisto boorsadaada shaashad adag oo xasilloon, tusaale ahaan kuwa ugu caansan, sida Bitcoin.
Taas bedelkeeda, haddii aad rabto inaad fuliso oo keliya hawlgallada ganacsi ee dhexdhexaadka ah ama muddada-gaaban waxaad u baahan doontaa xoogaa aqoon dheeri ah oo ku saabsan akhriska iyo tarjumaadda jaantusyada. Waxaad sidoo kale ubaahan doontaa inaad markasta goobta joogto oo aad lasocoto horumarka warka iyo isbedelka mashaariicda kaladuwan ee aad xiisaynayso maalin kasta.
Inta badan maal-galiyehu wuxuu u muuqdaa inuu haysto shaqooyin kala duwan iyadoo kuxiran waqtiga soo-gaadhista ee uu qorsheynayo inuu qabto. Waa fikrad caddaalad ah taas oo ah maalgashiyo kaladuwan. Iibsashada lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' macnaheedu waa inaad haysato ama xitaa ganacsi. Midkoodna ama maya, laakiin wadajir.
Ka taxaddar in kastoo! Haddii aadan aqoon qoto dheer u lahayn ganacsiga waxaa la doorbidaa inaad ka fikirto kaliya maalgashi muddo dheer ah.
Xitaa kiiskan, si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la yeesho xeelado kormeerka e dib-u-miisaamidda faylalka.
Cazoo! Ii sheeg xeeladahaas ifka ah ee dadaalka yar yar noo saamaxaya inaan si fiican u wanaajinno maalgashigeenna oo aan naga dhigno kuwo badan oo ka mid ah shilimaadka internetka ee sixirka ah!
Haddii aan doonayo inaan iibsado cryptocurrencies, xagee ku hayaa iyaga? Waxaa jira boorsooyin kala duwan (boorsooyin) la isticmaali karo, xulashaduna sidoo kale waa mid ku xiran xaaladdan: waxay kuxirantahay aqoonta aad u leedahay qalabka kala duwan.
Maskaxda ku hay fikraddan aasaasiga ah: waxaad dhab ahaantii haysataa cryptocurrencies oo keliya haddii aad leedahay furayaasha khaaska ah (jumlada abuurka) si aad uhesho boorsada jeebka.
Furayaashaada maahan, maahan CRYPTO-kaaga!
Dhinacani maahan wax yar sababtoo ah waxay tusineysaa in haddii aad ku ilaaliso cryptocurrencies-kaaga Meel kasta oo isweydaarsiga ah ee aadan haysan furayaasha gaarka ah, laakiin kaliya xogta aad ku heli karto koontadaada. Marka adigu runtii ma lihid milkiilaha waxyaabahaas loo yaqaan 'cryptocurrencies 100%'.
Waxaan kugula talin karaa haddii aad rabto inaad iibsato crypto mashruuc muddo-dheer ah, waxaad helaysaa nabadgelyo adiga oo isticmaalaya jeebka qalabka. Inta badan maalgashigaagu wuxuu noqon doonaa muddada dhow, inbadan ayaad u baahan doontaa inaad qadaadiicda u diyaargarowdo adeegsiga, sidaas darteedna isweydaarsiga.
Waxa loo baahan yahay in si fiican loo fahmo ayaa ah in fikradda ah "badbaadada" ay tahay in si buuxda loo horumariyo. Isticmaalidda jeebka qalabka ee aadka u ammaan iyo gebi ahaanba lama taabtaan waa muhiim, laakiin haddii aan ka buuxino shitcoin iibsaday iyada oo aan lahayn khad cayiman oo horay loo go'aamiyay, si fiican, aad iyo aad u badan.
Ma rabtaa inaad ku iibsato Isweydaarsi? Waan jeclahay Binance, waxayna ii ogolaaneysaa inaan sameeyo waxyaabo badan. Haddii aanad hore uga mid ahayn Beddelkan waxaad ku samayn kartaa lambarkayga gudbinta https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (tixraac id: EV6X8DW5) waxaadna yeelan doontaa 20% guddiyo qiimo jaban isla markaaba, weligood. Aynu Ruxno!
Ha dhagaysan waxa shisheeyaha ku jira internetka ama nin ka socda YouTube uu ku leeyahay Lambo asal ahaan. Samee baaritaankaaga. Sida ugu badan ee ay suuqu u egyihiin kaanis wakhtigan taariikhiga ah (Meey 2021), istiraatiijiyaddu isbeddel ayey sameyn doontaa
Sida qof lacag ka sameeyay GameStop, Dogecoin iyo tigidh bakhtiyaa-nasiib sannadkan, talada dhaqaale ee ugu wanaagsan ee aan ku siin karo ayaa ah inaad uun noqoto doqon nacas ah.
- Alex Giampapa (@Giamdaddy) April 28, 2021
Maqaalka horeMetamask: talaabo talaabo talaabo ah oo loogu talagalay jeebka ugu fiican ee DeFi